Miteraka fatiantoka ho an’ny firenena Malagasy ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto amintsika. Araka ny tarehimarika navoakan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny ankizy (UNICEF) tamin’ny taona 2017 dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka avokoa ny 50 % ny zaza latsaky ny dimy taona. Mitentina ny 743 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very noho io tsy fanjarian-tsakafo io. Ny 87 tapitrisa dolara na 313 miliara ariary amin’io fatiantoka io dia noho ny tsy fahazoan’ny olona misitraka ny sira misy ioda sy “fluor”. Ho fanamafisana ny fandaharan’asan’ny UNICEF sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ary ny fanjakana Malagasy amin’ny famokarana sira misy ioda dia novatsiana fitaovana toy ny milina mampisy ioda sy “fluor” ny sira ireo mpamokatra sira ao faritra Menabe. Ny 14 febroary 2019 tao Morondava no nizarana izany tamin’ny fomba ofisialy. Notokanana tamin’io fotoana io ihany koa ny toeram-pamokarana sira misy ioda.
Araka ny fantatra dia tsy ampy ioda ny 76 % ny vehivavy Malagasy, tena tsy ampy ioda ny 84% ny vehivavy bevohoka ary ny 25 % ny tokantrano Malagasy ihany no mbola mampiasa sira ioda. Raha ny fanazavan’ny teo anivon’ny UNICEF anefa dia ilain’ny vehivavy bevohoka sy ny zaza fa indrindra ny mponina ny fampiasàna sira misy ioda sy “fluor”. Manampy amin’ny fitomboan’ny ati-dohan’ny zaza sy ny fitomboany manomboka an-kibo ny ioda. Ankoatra izany, manampy ny vatana ho salama lalandava ihany koa. Tsy adinoina ihany koa fa misoroka ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Raha ny tombontsoa azo avy amin’ny “fluor” indray dia anisany miaro ny nify tsy ho simba (carie dentaire) ity singa iray ity. Sady hanampy an’ireo mpamokatra sira ao Menabe mba hamokatra sira misy ioda no hanampy ny tokantrano hampiasa sira misy ioda ireto fanomezana avy amin’ny UNICEF sy ny mpiara-miasa aminy ireto.
‹ Salon ITM 2019: L’Indonésie sera le pays invité d’honneur	› FISOTROAN-DRONONO: Hiroso amin’ny “fanafoanambainga”